Posted by mtssnrty at 10:37 AM Labels: mtssntry2comments
ဒီ blog အတွက် စာမရေးဖြစ်တာတောင် တော်တော်ကြာသွားပြီ။ အန်တီဆောင်းကိုလဲ post တစ်ခုလောက်တော့ မကြာခင်ရေးပေးပါမယ်လို့ ကတိကလဲ ပေးထားတော့ ဘယ်လို အကြောင်းအရာမျိုးကိုရေးရရင် ကောင်းမလဲဆိုပြီးစဉ်းစားနေတာနဲ့တင် အချိန်က ကုန်ရော။ ဒီလိုနဲဘဲ အန်တီဆောင်းကို Saturn ဂြိုလ် ကိုပို့လိုက်မယ်လို့ ဆုံးဖြတ် လိုက်တယ်။ ဒီလိုဘာလို့ ဆုံးဖြတ်ရတာလဲ ဆိုတာ နည်းနည်းလောက်တော့ ရှင်းပြချင်ပါ တယ်။ ပထမအချက်က အန်တီဆောင်း ကမ္ဘာ မှာရှိနေရင် ပူညံပူညံနဲ့ နောက်ထပ် post တွေ ထပ်ရေးခိုင်း နေမှာစိုးလို့။(နောက်တာပါ)။ ဒုတိယအချက်ကတော့ ဒီ blog မှာ ကျွန်တော်အရင်ကရေးဖူးတဲ့ Asteroid တစ်ခုရဲ့ လမ်းကြောင်းကို ပြောင်းယူခြင်း ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ် နဲ့ အခုရေးမယ့်အကြောင်းအရာနဲ့ theoretically ချိတ်ဆက်လို့ ရနေတာရယ် ကြောင့်ပါ။ ကျွန်တော်အဲဒီ post ကိုရေးတုန်းကတော့ တကယ်တမ်း asteroid တစ်ခုရဲ့ လမ်းကြောင်း ကို ပြောင်း လို့ရလောက်မယ့် trajectory design ကို ကိုယ်တိုင် မတွက်နိုင် သေးပါဘူး။ အခုတော့ အဲလို trajectory design မျိုး လိုအပ်ရင် တွက်နိုင်မယ့် algorithms တွေ programs တွေ ရေးသင့်သလောက် ရေးပြီးပြီဆို တော့ စမ်းကြည့်ချင် တာနဲ့ဘဲ အန်တီဆောင်းကို Saturn ကို ပို့ ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တော့တယ်။ အဓိက ကတော့ စာဖတ်ပရိတ်သတ်အတွက် ထူးခြားတဲ့ Interplanetary trajectory design တွေနဲ့ မိတ် ဆက်ပေးချင်လို့ပါ။ ဒီနေရာမှာ European Space Agency က ၁၉၉၇ ခုနှစ်မှာ စ လွတ်ပြီး ၂၀၀၄ ခုနှစ်မှာ Saturn ဂြိုလ်ကို ရောက်တဲ့ Cassini Spacecraft ရဲ့ trajectory ကို ပြောပြ ချင်ပါတယ်။ Saturn ဂြိုလ်ကိုရောက်ဖို့ဆိုရင် ကမ္ဘာကနေ တိုက်ရိုက်ပစ်နိုင်ဖို့ လုံလောက် တဲ့ Velocity Impulse ကို ပေးနိုင်ဖို့ဆိုရင် ထည့်ရမယ့် လောင်စာနဲ့တင် ဘာပစ္စည်း မှ စေတန်ကို ရောက်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီနေရာမှာ ESA က အသုံးပြုခဲ့တဲ့ Trajectory က တော့ အောက်ပါအတိုင်းပါ။ Idaea ကတော့ ကမ္ဘာကနေ စေတန်ဂြိုလ်ကို တိုက်ရိုက်ပစ် မယ့်အစား လိုအပ်တဲ့ Velocity ကို Venus ဂြိုလ်ရဲ့ ဆွဲအားကို လွဲအား အဖြစ် အသုံးပြုပြီး ပြန်ထွက်လာမယ့် Spacecraft ရဲ့ လမ်းကြောင်းကို ကမ္ဘာရဲ့ဆွဲအား ဂျူပီတာ တို့ရဲ့ ဆွဲအားတွေနဲ့ ထိမ်းပြီး စေတန်ဂြိုလ်ကို အရောက် သွားဖို့ပါဘဲ။ အဲလိုသာ သွားနိုင်မယ်ဆို ရင် အသုံးပြုရမယ့် Energy က Venus ကိုသွားလို့ရမယ့် Energyသာသာဘဲကုန်ပါလိမ့်မယ်။
ဒီ Trajectory ရဲ့ အဓိက အားနည်းချက်ကတော့ ဒီလို Trajectory မျိုး realize လုပ်ဖို့ နှစ်တွေအများကြီးထပ်ထပ် ပြီး စောင့်ရမှာမို့လို့ပါ။ အဓိကကတော့ ဗီးနပ်စ်၊ကမ္ဘာ၊ ဂျူပီတာ နဲ့ စေတန်တို့ရဲ့ အနေအထားပါဘဲ။ ဒီနေရာမှာ အရေးအကြီးဆုံးကတော့ ဂျူပီတာ နဲ့ စေတန်တို့ရဲ့ အနေအထားက ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း အလိုက်သင့်ရှိဖို့ပါဘဲ။ ဒီလိုမျိုး နောက်တစ်ကြိမ်ဖြစ်ဖို့ဆို၇င် ဂျူပီတာက နေကို တစ်ပတ်ပတ်ပြီး နောက်တစ်ကြိမ် စေတန် ကို လိုက်မီခါနီး အချိန်ပါ။ ဗီးနပ်စ်နဲ့ ကမ္ဘာ ရဲ့ အနေအထားကတော့ လိုအပ်သလို ကစားလို့ လွယ်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဗီးနပ်စ်နဲ့ ကမ္ဘာ တို့ဟာ ဂျူပီတာတို့ စေတန်တို့ နေကို ပတ်နေတဲ့ velocity နဲ့ ပိုပြီးမြန်တဲ့ velocity တွေနဲ့ ပတ်နေလို့ပါဘဲ။
ဒီနေရာမှာ အဲဒီ trajectory ရဲ့ အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကို ရဖို့ကတော့ ခက်ခဲပါလိမ့်မယ်။ထို့အတူဘဲ ရလာတဲ့ trajectory အတိုင်း သွားနိုင်မယ့် Spacecrft ကို
တည်ဆောက်ဖို့လဲမလွယ်ပါဘူး။ trajectory design လုပ်ရာမှာတော့ အောက်ပါ theories
တွေကို ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် ပေါင်းစပ်အသုံးပြုနိုင်မှအဆင်ပြေမှာပါ။ အဒါတွေကတော့
1. Solving Lambert’s problem
2. Gravity assist trajectory design
3. Deep space maneuvers
4. Lowden’s Primer theory and their application တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ အဲဒီ trajectory ကို အောက်ပါအတိုင်း အပိုင်းလိုက် ခွဲခြားလို့ရပါတယ်။
5. Jupiter-Saturn တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီတစ်ပိုင်းစီကို ရှင်းဖို့ sub program တွေရေးရာမှာ အထက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ theories တွေကို ပေါင်းစပ်အသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပထမတော့ ဒီလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက် ပါဝင် မယ့် အချိန်အလိုက် တည်နေရာ၊ အလျှင်တွေကို သိနိုင်မယ့် planetary နဲ့ပတ်သက်တဲ့ background programs တွေ ရှိရမယ်။ ပြီးရင် အထက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ theories တွေ ကိုသုံးမယ့် subprograms တွေရှိရမယ်။ ပြီးရင် trajectory အပိုင်းတစ်ခုစီအတွက် subprograms တွေရှိရမယ်။ ပြီးရင်တော့ Earth-Saturn သွားဖို့အတွက် အထက်ပါ subprograms တွေကိုသုံးပြီး global optimization problem တစ်ခုကို formulate လုပ်ပြီး ရှင်းရမှာပေါ့။ ဒီနေရာမှာ အောက်ဖော်ပြပါ objective function ကို minimize လုပ်ရမှာပေါ့။
ဒီ function ကတော့ vector X အပေါ်မူတည်တဲ့ velocities impulses စုစုပေါင်းပါဘဲ။ vector X ကတော့အောက်ပါအတိုင်း ပါ။
အဒီ vector X မှာပါဝင်တဲ့ အချက်တွေကတော့ ဘယ်နေ့ ဘယ်ရက် ဘယ်အချိန်မှာ ကမ္ဘာ ကနေ velocity ဘယ်လောက်နဲ့ စထွက်ရမယ်၊ ပြီးရင် လမ်းကြောင်းမှာ ဘယ်အချိန် ဘယ်နေရာမှာ DSM ဘယ်လောက်ကို ဗီးနပ်စ်မရောက်ခင် ပေးမယ်၊ဗီးနပ်စ်ကို အချိန် ဘယ်လောက်ကြာကြာ ပျံသန်းမယ်၊ ဗီးနပ်စ်နားက ဘယ်လောက်အကွာအဝေးကနေ ဘယ်လောက်အလျှင်နဲ့ ဖြတ် ပျံမယ် စသည်ဖြင့် အပိုင်းတစ်ခုချင်းစီအလိုက်အဒီအချက် တွေအကုန်အပြင် နောက်ဆုံး စေတန်ရောက်ရင် ဘယ်လောက် Velocity နဲ့ break လုပ်ရ မယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေပါ။ အခုစေတန်သွားမယ့် trajectory မှာဆိုရင် အဲလိုအချက်မျိုး (26) ချက်အပေါ် မူတည်နေပါတယ်။ maths စကားနဲ့ ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ decision vector ရဲ့ length က အရမ်းရှည်နေတော့ objective function ကို minimize လုပ်ရမှာ မလွယ်ဘူးပေါ့။ local minimum ပေါင်း အများကြီးရှိနိုင်ပြီး အဲဒီအထဲကမှ global minimum ရှာရမှာကတော့ mathematical super challenge တစ်ခုပါဘဲ။ ယနေ့ခေတ် မှာတော့ global optimization နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ methods တွေကတော့ အများကြီးပေါ့။ ဥပမာအားဖြင့်ဆိုရရင်တော့
2. Differential evolution algorithms
3. Particle swarm optimization စသည်ဖြင့်ပေါ့လေ။ ခက်တာက အဲဒီ method
တွေက ကျွန်တော်တို့ formulate လုပ်ထားတဲ့ objective function ရဲ့ global minimum point ကို ရှာတွေ့မယ်ဆိုတဲ့ warranty မရှိတာဘဲ။ ကျွန်တော်တို့ ရှင်းရမယ့် ပုစ္ဆာကလဲ သူ့ maths စာအုပ်တွေထဲမှာ ရှင်းပြထားတဲ့ example မျိုးမှမဟုတ်တာ။ ရှည်လျားထွေပြား တဲ့ equations ပေါင်းမြောက်များစွာကို အပတ်ပေါင်းများစွာပတ်ထားတဲ့ subprograms ပေါင်း များစွာကို ပေါင်းစပ်ပြီးရေးထားတဲ့ function ကို minimize လုပ်ရတာဆိုတော့လဲ ဘယ်လွယ်ပါ့မလဲ။ theory အရ အဖြစ်နိုင်ဆုံး Initial guess ကိုပေးနိုင်ရင်တော့ အဖြေ
ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော်ပြောချင်တာက အဲဒီ ခက်ခဲပါတယ်ဆိုတဲ့ Interplanetary trajectory optimization problem တစ်ခုကို ကျွန်တော်လဲ တည်ကြည့်ပြီး ရှင်းလို့ရလာ တဲ့ results ကောင်းလေးတွေအကြောင်းပါ။ အဲဒါကတော့ Saturn ကို ESA က သွားတဲ့လမ်းကြောင်းလိုမျိုး ဘယ်တော့ ဘယ် လို ထပ်သွားရင် ရမယ်ဆိုတာပါဘဲ။ *****(အန်တီဆောင်းရေ အခုကျွန်တော် အောက်မှာ ရေးပြမယ့် အချိန်ကန့်သတ် ချက်တွေ လမ်းကြောင်းတွေအတိုင်း စေတန်ဂြိုလ်ကို သွားရမယ်။ အထုပ်ပြင်ထား။ ပြီးရင်တော့ တိုက်တန် လ ပေါ်က titanium ပျော်ရည်တွေ ယူပြီး ကမ္ဘာ ကိုပြန်လာ လို့ရမယ့် လမ်းကြောင်းကို ဆက်တွက်ပြီးရင် ပြန်လာခေါ်မယ်။)*****
စေတန်ကိုသွားရမယ့် အချိန်ဇယားကတော့အောက်ပါအတိုင်းပါ။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ စက် တင်ဘာလ၊ (၂) ရက်နေ့မှာ ကမ္ဘာ ကနေစထွက်ပါမယ်။ နောက်ထပ် ရက်ပေါင်း (၁၄၃.၈) ရက် မှာတော့ ဗီးနပ်စ်နားက ဖြတ်ပျံပါမယ်။ နောက်ထပ်ရက်ပေါင်း (၃၉၇.၂) ရက်မှာ ဗီးနပ်စ်နားက နောက်တစ်ကြိမ်ဖြတ်ပျံပါမယ်။ အဲဒီဗီးနပ်စ်နားက ဖြတ်ပျံလာမယ့် ယာဉ်ဟာ ရက်ပေါင်း (၆၀.၄) အကြာမှာ ကမ္ဘာ နားကဖြတ်ပျံပြီး နောက်ထပ်ရက်ပေါင်း (၄၃၅.၄) ရက်မှာ ဂျူပီတာဂြိုလ်နားကို ဖြတ်ပျံပြီး နောက်ထပ်ရက်ပေါင်း (၁၃၈၈.၄) ရက်မှာတော့ စေတန်ဂြိုလ် ကို ရောက်မှာပါ။ အစအဆုံးဆိုရင်တော့ ရက်ပေါင်း (၂၄၂၅.၂) ရက်ကြာမှာ
ကမ္ဘာနဲ့ တခြားဂြိုလ်တွေရှိရမယ့် နေရာတွေက အောက်ဖော်ပြပါ အတိုင်းပါ။
ဒီနေရာမှာ Rpl1AU ဆိုတာကတော့ ကမ္ဘာကနေ စထွက်တဲ့ အချိန် ကမ္ဘာရှိရမယ့် နေရာပါ။ heliocentric ecliptic coordinate system မှာရေးထားတာပါ။ unit ကတော့ Astronomical unit ဖြစ်ပါတယ်။ 1 AU ကို ၁၄၉၅၉၈၀၀ ကီလိုမီတာရှိပါတယ်။ Rpl2AU က ဗီးနပ်စ်နားကို ပထမအကြိမ် ဖြတ်တဲ့အခါ ဗီးနပ်စ် ရှိရမယ့်နေရာပါ။ Rpl3AU က ဗီးနပ်စ်နားကို ဒုတိယအကြိမ် ဖြတ်တဲ့အခါ ဗီးနပ်စ် ရှိရမယ့်နေရာပါ။ Rpl4AU က ဗီးနပ်စ် ကနေအပြန် ကမ္ဘာနားက ဖြတ်တဲ့အခါ ကမ္ဘာ ရှိရမယ့်နေရာပါ။ Rpl5AU ကတော့ ဂျူပီတာ နားက ဖြတ်တဲ့အခါ ဂျူပီတာ ရှိရမယ့်နေရာဖြစ်ပြီးတော့ Rpl6AU ကတော့ ကျွန်တော်တို့ စေတန်ကို ရောက်တဲ့ အချိန်မှာ စေတန်ရှိရမယ့်နေရာပါ။
အဲဒီလို ဂြိုလ်တွေနားက ဖြတ်ပျံတဲ့အခါ ဂြိုလ်နဲ့ အနီးဆုံးကပ်ရမယ့် အကွာအဝေး တွေကတော့ အောက်ပါအတိုင်းပါ။
အောက်ဖော်ပြပါဇယားကတော့ ဂြိုလ်တစ်ခုနဲ့ တစ်ခုကြား velocity impulse (Deep Space Maneuver) ပေးရမယ့် နေရာ၊ အချိန် နဲ့ ပမာဏ ပါ။
ကမ္ဘာ့ဆွဲအားထဲကနေ လွတ်သွားဖို့ ပထမဦးဆုံး 4.064920 km/sec velocity impulse ပေးရမှာဖြစ်ပြီးတော့ နောက်ဆုံး စေတန်ဂြိုလ်ရဲ့ ပတ်လမ်းထဲကို ရောက်ဖို့ 0.5329656 km/sec velocity impulse ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ တခြား trajectory နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အချက်အလက်တွေတော့ စာဖတ်သူတို့ အာရုံနောက်ကုန်မှာစိုးလို့ ထပ်ပြီး မရေးပြတော့ပါဘူး။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ဒီ trajectory ရဲ့ အားသာချက်ကိုပြောချင်ပါတယ်။ အဲဒါကတော့ ဒီ mission တစ်ခုလုံးစာအတွက်ကို total velocity impulse 5.68047932 km/sec ပဲ ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီပမာဏဟာ ကျွန်တော်တို့ ကမ္ဘာမှာ လက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ rocket တွေနဲ့ အထောက်အပံ့ပေးလို့ ရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲတော့ လက်ရှိကမ္ဘာမှာ ရှိတဲ့ rocket တွေရဲ့ performance အရ စေတန်ဂြိုလ်ကို တိုက်ရိုက်သွားဖို့ မလွယ်သေးတဲ့ အချိန်မှာ ဒီလမ်းကြောင်း (trajectory) သာလျင် စေတန်ဂြိုလ်ကို သွားဖို့ အကောင်းဆုံးပါ လို့ပြောချင်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့်မို့လို့လဲ ESA က ဒီလမ်းကြောင်းမျိုးကို တွက်ပြီး လက် တွေ့စမ်းသပ်ကြည့်ပြီးပါပြီ။ စေတန်ဂြိုလ်ကို နောက် တစ်ကြိမ် ထပ်သွား လို့ရနိုင်မယ့် ကျွန်တော် တွက်ချက်ရှာဖွေ ဒီဇိုင်းလုပ်ထားတဲ့ လမ်းကြောင်းကတော့ အောက်ပါအတိုင်း ပါလို့ပြောရင်း ဒီ post ကို နိဂုံးချုပ်လိုက်ပါတယ်။
၂၀၁၂ခုနှစ်မှာ ကမ္ဘာပျက်ခြင်း ပြဿနာ၏ နောက်ဆုံးအဖြေ
Posted by ADMIN at 2:25 PM Labels: Astrophysics2comments
Source: planet, Wikipedia, tgdaily
Posted by ကိုပခန်း at 8:08 PM0comments
၂၀၁၂ နှင့်ပတ်သတ်၍ ဆရာနျူမာန် ရေးသားပြုစုထားသည်ကို အောက်ပါလင့်တွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါကြောင်း အကြံပေးပါရစေခင်ဗျာ။
အထက်ပါလင့်မှာ စာရေးသူ ဆရာနျူမာန်၏ အောက်ပါစာအုပ်မှ အကြောင်းအရာများကို ဆရာ့ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် စာစီထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
တစိပို့ချင်း ခွဲဖတ်မယ်ဆိုရင်တော့ အောက်ပါလင့်များအတိုင်း ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
၂၀၁၂ ပြဿနာ အပိုင်း(၁)
၂၀၁၂ ပြဿနာ အပိုင်း(၂)
၂၀၁၂ ပြဿနာ အပိုင်း (၃)
၂၀၁၂ ပြဿနာ အပိုင်း (၄)
၂၀၁၂ ပြဿနာ အပိုင်း (၅)
၂၀၁၂ ပြဿနာ အပိုင်း (၆)
၂၀၁၂ ပြဿနာ အပိုင်း (၇)
၂၀၁၂ ပြဿနာ အပိုင်း (၈)
၂၀၁၂ ပြဿနာ အပိုင်း (၉)
Posted by ခွန်း at 2:35 PM Labels: Astrophysics, Trans-Neptunian objects, ခွန်း 44 comments
စာဖတ်သူများ အားလုံးသို့ ဖြေရှင်းချက် (၂၀၁၂ ပြဿနာ၏ နောက်ဆက်တွဲ)
Posted by ခွန်း at 6:54 AM Labels: Discussion, ခွန်း 21 comments
မနေ့က တစ်ရက်တည်းမှာ ဒီဘလောဂ့် လေးကို အလည်လာကြသူတွေ စံချိန်တင်အောင် များပြား ခဲ့ပါတယ်။ အဲလို အများကြီး လာဖတ်ကြတာကို ကျနော် အများကြီး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။ comment တွေနဲ့ cbox မှာ ရေးသွားကြတာတွေ အရ အကြောင်း အရာတစ်ခုတည်းကိုပဲ ဦးတည်ပြီး ဖတ်သွားကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အဲဒီ ကိစ္စနဲ့ ပါတ်သတ်ပြီး ရေးသားသွားကြတာတွေ အများကြီးကို ကျနော် ပြန်လည် ရှင်းပြဖို့ လိုအပ်ပေမယ့် တစ်ဦးချင်း မရှင်းပြ နိုင်လို့ ဒီပို့စ်လေး တင်လိုက်တာပါ။ ၂၀၁၂ ကိစ္စနဲ့ ပါတ်သတ်ပြီး Youtube video ကို ဘာသာ ပြန်ပေးထားတာကိုသာ ဖတ်မိ ကြပြီးတော့ ကျနော်ပြန် ရှင်းပြထားတဲ့ ပို့စ်ကိုတော့ ဖတ်မိကြဟန် မတူဘူးလို့ ကို အလှတရား သတိပေး တဲ့ အတွက် ဒီပို့စ် တင်ကို တင်မှ ရတော့မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တာပါ။ သတိပေးတဲ့ ကို အလှတရားကို အများကြီး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။ စာဖတ်သူတွေ ဝင်ဆွေးနွေး ကြတဲ့ အကြောင်း အရာတွေကို အများ သုံးသပ်နိုင်အောင် ပြန်လည် တင်ပြလိုက်ပါတယ်။ သူတို့ ဆွေးနွေးချက် တွေနဲ့ အတူ ကျနော် ပြန်လည် ရှင်းပြတဲ့ အချက်တွေကိုပါ ဖတ်ပြီးတော့ ဝေဖန် အကြံပြု ပေးစေလို ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ဟုတ်ပါတယ် ကျွန်တော်ကတော့ မယုံနိုင်ပါဘူး ဘာလို့လဲဆိုတော့ မနက်ဖြန်ဆိုတာတောင် မယုံနိုင်စရာ အကြောင်း၇ှိနေလို့ပါ.. ကမ္ဘာပျက် မယ့်အကြောင်း စုံလင်စွာ သိရှိလိုပါက မြတ်စွာဘုရားရှင် ကိုယ်တော် တိုင် ဟောကြား ထားသော စက္က၀တ္တိသုတ် မှာရှင်းလင်း စွာ မှတ်သား နားယူ နိုင်ပါတယ် ခင်ဗျာ ကိုယ့် အတွေးနဲ့ ကိုယ့်ဆိုရင်တော့ အချိန်ကုန်တာ လွဲလို့ အကျိုး ရလာမည့် မဟုတ် ဟု ဆိုချင် ပါတယ် ခင်ဗျာ
November 10, 2008 12:48 PM
မင်းတို့ ဗုဒ္ဓ က တော်တော် စွမ်းတဲ့ ပုံပဲနော် ဒါပေမယ့် သူများတွေ ဘုရားလို ပြန်ရှင်သန် မြောက်တဲ့နေ့ တွေဘာတွေ ရှိပုံ မပေါ်ဘူး မင်းတို့ အရိမေတ္တယ ကရော ဘယ်တော့ လာမှာလဲ အဆက်အသွယ် ရှိရင် ပြောလိုက်အုံး အမှီ လာပါတော့လို့ ဒါမှမဟုတ်လဲ မြန်မြန် တရားကျင့် ခိုင်းလိုက်ကွာ ငါကြည့်ရတာ အခုခေတ် လူတွေ ဘုန်းကြီးတွေ တရားကျင့် ပုံမျိုးဆို ရင်တော့ ဘယ်တော့မှ ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ဘူး
November 11, 2008 9:42 PM
11 Nov 08, 01:21
မြင့်မြတ်: ကမ္ဘာမပျက်ခင် နှစ်တစ်သိန်းတမ်းအလိုမှာ စ၍ ကောလဟာလမျိုး ၅-ပါး ပေါ်ပေါက်ပါတယ်။ အဲဒါတွေကတော့- ခုဒ္ဒကပါဌအဋ္ဌကထာ။ ၁၀၁။ သုတ္တနိပါတ်။ ဋ္ဌ။ ဒု-အုပ်။ ၃-တို့၌ ပါရှိသည်မှာ တစ်စုံတစ်ခုသောသတင်းစကား၏ ရှေ့ပြေးနိမိတ် နောက်ခါ
11 Nov 08, 01:22
မြင့်မြတ်: (၁) ဗုဒ္ဓ ကောလာဟလ- ဘုရားမပွင့်မီ နှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်က ကျော်ကြားသောပဲ့တင်သံ၊ (၂) ကပ္ပ ကောလာဟလ- ကမ္ဘာမပျက်မီ နှစ်ပေါင်းတစ်သိန်းက ကျော်ကြားသောပဲ့တင်သံ၊ (၃) စက္က၀တ္တိကောလာဟလ- စကြာမင်းမပေါ်မီ နှစ်ပေါင်းတစ်ရာက ကျေ
မြင့်မြတ်: လောကကြီးတလွဲတချော်ဖြစ်အောင် ပြောသေားစကားမျိုး မဖြစ်သင့်ပါ။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ဦးအနေဖြင့် မြတ်ဗုဒ္ဓဟောကြားသော ဒေသနာတော်တို့မှာ တစ်ပါး အခြားသော ကောလဟာလများသည် ယုံနိုင်ဖွယ်ရာမရှိပါ။ အခြားဘာသာဝင်ဖြစ်ပါက မပြေ
12 Nov 08, 09:13
12 Nov 08, 09:17
ငါ: ငါ ပြောမယ် မင်းတခြားဘာသာတွေကို တည့်တည့်ပဲဖြစ်ဖြစ် ကွေ့ကာဝိုက်ကာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဘာမှစော်ကားစရာမလိုဘူး
အပေါ်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ အကြောင်းအရာတွေ ရေးသွားကြတဲ့ စာဖတ်သူတွေကို ကျနော် ရှင်းပြလိုပါတယ်။ ပထမဆုံး အချက်အနေနဲ့ ကျနော်ဟာ သိပ္ပံပညာကို ဘာသာတရားနဲ့ ဘယ်တော့မှ ရောယှက်မယ် မဟုတ်ဘူး ဆိုတာပါ။ ဘာဖြစ်လို့လည်း ဆိုတော့ သိပ္ပံပညာ ဟာ အပေါ်ရံပါ။ ဘာသာတရား က အနှစ်သာရပါ။ သိပ္ပံပညာ ဖြင့် လူသားတွေအကျိုးရှိ သည်များကို ဖန်တီးနိုင်၊ အကျိုးယုတ်စေသည် များကို ကာကွယ် နိုင်တာတွေ ရှိသော်လည်း တကယ့်ချမ်းသာ အစစ်ကိုတော့ မပေးနိုင်ပါဘူး။ ဘာသာတရားတွေရဲ့ ဟောကြားချက်များကို သိပ္ပံ ပေတံ နဲ့ လိုက်လံ တိုင်းတာနေခြင်းဟာ မှန်ကန်တဲ့ လုပ်ရပ် မဟုတ်ပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ သိပ္ပံ ပညာနဲ့ ရှင်းပြလို့ မရနိုင်တဲ့ ကိစ္စတွေ အများကြီး ရှိနေလို့ပါ။ အဲဒီလိုပဲ သိပ္ပံတွေ့ရှိချက်များကို ဘာသာတရားနဲ့ ညီမညီ ချိန်ညှိနေခြင်းဟာလည်း မမှန်နိုင် လို့ မြင်ပါတယ်။ ကျနော် ဘယ်ဘာသာ တရားကိုမှ ပုတ်ခတ်လိုသော ဆန္ဒ မရှိပါ။ အချို့သော သူတွေဟာ လူအများရဲ့ မသိနားမလည်မှုကို အသုံးချပြီး ကိုယ်ယုံကြည်သော အရာကို အများ လက်ခံလာစေဖို့ ဖိအား ပေးတတ်ကြပါတယ်။ အဲဒီလို လုပ်လာတဲ့ အခါ မူလ ရှိရင်းစွဲ ဘာသာတရားရဲ့ အနှစ်သာရ တွေ ပျောက်ဆုံးကုန်ပါတယ်။ အဲဒီလို လူမျိုးတွေကို စိတ်ထဲက မနှစ်မြို့ကြောင်း ဝန်ခံ ပါတယ်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ် ကိစ္စမှာ ကျနော်ဟာ အကြောင်း အရာကို တင်ပြခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။ မည်သည့် ဘာသာတရား ကိုမှ မှားသည် မှန်သည် မဝေဖန်ခဲ့ပါ။ သိပ္ပံဆိုင်ရာ အကြောင်း အရာ တစ်ရပ်ကို ပြောချင်ရင် သိပ္ပံ နည်းကျ ပြောမှ လက်ခံ နိုင်ပါမယ်။ သိပ္ပံ မဟုတ်သော ယုံကြည်ချက်များကို လက် မခံနိုင်ပါ။ အဲလို လက်မခံခြင်းဟာ သိပ္ပံ နှင့် ဘာသာတရားကို သီးခြား ထားလိုတဲ့ ကျနော့် စိတ်ကြောင့်သာ ဖြစ်ပြီးတော့ ဘယ်ဘာသာ ကိုမှ စော်ကား ခြင်းမဟုတ်ကြောင်း အလေးအနက် ပြောပါရစေ။ လာဖတ်တဲ့ အတွက်ရော ထင်မြင်ချက်လေးတွေ ရေးပေးသွားတဲ့ အတွက် ရော အများကြီး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။
ဟားဟား မကြောက်ဘူးဗျို့ယုံလည်း မယုံကြည်ဘူး ဖြစ်လာခဲ့၇င်လည်း အေးဆေးပါ ကိုယ်တယောက် ထဲမှ မဟုတ်တာ သေစမ်းပါစေ အကုန်လုံး သေလို့ ကတော့ ကျွန်တော် ပြောချင်တာ ကတော့ လာမယ့် ဘေးကို တွေးကြောက်နေမယ့်အစား လုပ်စရာရှိတာသာ ပုံမှန်လုပ် နေထိုင်စားသောက်စမ်းပါ ခင်ဗျားတို့ ပြောသလို ကမ္ဘာတောင် ပျက်မယ် ဆိုမှတော့ ဘာမှ စုဆောင်း ထားစရာ လည်းမရှိဘူး ကာကွယ် စရာလည်း မလိုဘူး လွှတ်ရာ လွှတ်ကြောင်းလည်း စဉ်းစား တွေးပူမနေနဲ့ သေစမ်း ပါစေဗျာ အင်း စောစော သေတော့လည်း နောက်ဘ၀ တခုမြန်မြန် ရောက်တာဘဲ ကျွန်တော် ကတော့ လုံးဝ မကြောက် သလို လုံးဝ အယုံအကြည်လည်းမရှိပါ
November 11, 2008 11:01 AM
10 Nov 08, 22:50
ဖိုးအောင်: ဟာ အဲ ဒီ အချိန် မိန်းမတောင် မရသေး ဘူး ... စာအုပ်လေး ၀ယ် ဖတ် ပီးနည်းလမ်း ရှာထားဦးမ
11 Nov 08, 01:25
ရင်ခွင်ရိုင်း: ဘုရား တရားလေး လုပ်ထားကြဗျို့..
11 Nov 08, 01:58
ကောင်းကောင်း: ဟာာ အဲလိုကြီးဆိုရင်တော့ မိန်းမအခုယူ တော့မယ်ဗျာ..ဟီးးးးးးးးးးးး
11 Nov 08, 02:43
ဟားဟား: ဗေဒင်က ပြောတယ် နက်ဖြန်တောင်မင်းသေနိုင်တယ်တဲ့
11 Nov 08, 02:44
ဟားဟား: ကဲဘယ်သူစကားကို ယုံရမှာလ
ဟားဟား: ဟားဟားတို့ ကတော့ဟားတိုက်ပြီးတော့ကို ရည်လိုက
11 Nov 08, 02:45
အပေါ်က စာတွေ ရေးထားကြသူများကိုလည်း ကျနော် ရှင်းပြချင်ပါတယ်။ ၂၀၁၂ ကိစ္စကို တင်တာဟာ အဲဒီလို တကယ် ဖြစ်လာမယ်လို့ ပြောနေခြင်း မဟုတ်ပါ။ ပို့စ် မှာလဲ သေချာ ရှင်းပြထားပါတယ်။ နိုင်ငံတကာမှာ astronomy နဲ့ ပါတ်သတ်ပြီး hot ဖြစ်တဲ့ အကြောင်းအရာတစ်ခုကို astronomy blog တစ်ခု အနေနဲ့ ဖော်ပြ သင့်တယ်၊ မြန်မာတွေ သိအောင် ရေးပြ ပေးသင့်တယ်လို့ ခံယူလို့ ရေးပြခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့တွေ ဒီလို ပြောလို့ ဒီလို ဖြစ်လာလိမ့် မယ်လို့ ပြောလို့ မရပါဘူး။ ကျနော်တို့ဟာ သူတို့လို အချက်အလက် တွေနဲ့ မပြောနိုင် ပေမယ့် ကျနော်တို့ဟာ စဉ်းစား တွေးခေါ်တတ်ကြပါတယ်။ အဲဒီ ကိစ္စနဲ့ ပါတ်သတ်ပြီး စိတ်ဝင်စား သူတွေ အတွက် ပို့စ် တစ်ခုကို ထပ်ပြီး တင်ပေးခဲ့ ပါတယ်။ အဲဒီပို့စ်မှာ ကျနော် လက်လှမ်းမှီသလောက် အကြောင်း အရာ အချက် အလက် တွေ တင်ပြခဲ့ပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ချေ မဖြစ်နိုင်ချေတွေကို ကျနော် ဥာဏ်မှီသလောက် သုံးသပ် ပြခဲ့ပါတယ်။ မဖတ်ရသေးဘူး ဆိုရင် အောက်က ပို့စ်မှာ ဝင်ဖတ်ပေးပါ ခင်ဗျာ။ ပြီးရင် အဲကိစ္စနဲ့ ပါတ်သတ်တဲ့ အမြင်ကိုလည်း ရေးပေးစေချင်ပါတယ်။
11 Nov 08, 11:53
ဇော်ကြီး: ဘာတွေလျှောက်ပြောနေတာလဲ ဦးနှောက်တောင်ကောင်းသေးလားမသိဘူး .. သူ ကို သူ များ အိုင်းစတိုင်း မှတ်နေလားမသိဘူး ..ဟဟဟဟဟ
အပေါ်ကစာကို ရေးသွားတဲ့ ကိုဇော်ကြီး ဆိုသူကို ကျနော် တစ်ခု တောင်းဆိုပါရစေ။ ကျနော့် ရေးသားချက် တွေနဲ့ ပါတ်သတ်ပြီး မနှစ်သက် ကြောင်း သိရပါတယ်။ အဲလို မနှစ်သက် သူတွေ ရှိနေကြောင်း သိရတဲ့ အတွက် အများကြီး ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျာ။ ကျနော် ရေးသားချက်တွေနဲ့ ပါတ်သတ်ပြီး ဘာတွေ မနှစ်သက် ဘူးလဲ၊ ဘာတွေ ပြုပြင်သင့်လဲ.. အပြုသဘော ဆောင်တဲ့ ဝေဖန်မှုမျိုး ပေးပါလို့ တောင်းဆိုပါရစေ။
စာလာဖတ်သူများ အားလုံးကိုရော ကျနော့်ဘလော့ဂ်လင့် လေးကို အများထံ ဝေငှ ပေးကြသူများကို ရော အထူးပဲ ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ ယခု ကျနော် ရေးလိုက်တဲ့ ပို့စ်ဟာ တစ်စုံတစ်ယောက်ကို ထိခိုက် စေမယ် ဆိုရင် ရှင်းပြလိုတဲ့ စေတနာ အမှား ကြောင့်သာ ဖြစ်ကြောင်း ကြိုတင်တောင်းပန် ပါရစေ။
11/12/08 6:54 AM